ဒေါ်စုပြောတဲ့ သား ထိန်လင်း လူမိုက်ကြီး အမေ့စကားနားမထောင်လို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ေ-သရတာတဲ့ – Amara News
ဒေါ်စုပြောတဲ့ သား ထိန်လင်း လူမိုက်ကြီး အမေ့စကားနားမထောင်လို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ေ-သရတာတဲ့
ဒေါ်စုပြောတဲ့ သား ထိန်လင်း လူမိုက်ကြီး အမေ့စကားနားမထောင်လို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ေ-သရတာတဲ့ (အမေတစ်ယောက်ရဲ့ရင်တွင်းက အပူသောက)
သား ထိန်လင်း .. လူမိုက်ကြီး …အမေ့စကားနားမထောင်လို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ သေရတာ ..‘ လူဆိုတာ အထက်ရောက်နေရင် မနာလိုဖြစ်ပြီး မလိုသူများက မကောင်းကြံစည်တတ်တယ် … အစစ အရာရာ သတိထားပါ ‘ လို့
အမေပြောတုန်းက မင်းက လက်မခံဘူးလေ . . .‘ဗျာ .. ဘုရားတောင်မှ အတိုက်အခံ ရှိသေးတာပဲ ၊ကိုယ်ကသာ လမ်းမှန်ဖက်ကနေပြီး …..အကြောင်းမှန်ကို လက်ကိုင်ထားရင် ဘာမှကြောက်စရာ မလိုပါဘူး . စစ်တိုက်တုန်းကတောင် မသေခဲ့တာ ..မပူပါနဲ့ ‘ တဲ့ ..ဟင် ….ခုတော့ မင်းပြောသလို တိုက်ပွဲကြားက ကျည်ဆံတွေကြောင့် ကျဆုံးရတာ မဟုတ်ပဲ…
‘မနာလိုခြင်း ကျည်ဆံတွေ ‘ အသင့်ခံလိုက်ရပြီမို့လား … ‘‘ သမီးလေးအတွက် ခမည်းလေးပေးချင်လို့ပါ..ဆိုပြီး အမေ့ဆီကို နားကဒ်ကလေး လာတောင်းခဲ့တဲ့ သားကြီး . . .တပြားတချပ်မှ မရပဲ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ် လုပ်ရင်း အသက်ပါ စွန့်ခဲ့ရပီပေါ့ ထိန်လင်းရယ် ..”
ဗိုလ်ချုပ်အမေ အဖွားစုဟာ ဗိုလ်ချုပ်အလောင်းကို တွေတွေကြီး ကြည့်ရင်း ဂရုဏာဒေါသောနဲ့….ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အမည်အောင်ဆန်းကို မခေါ်ပဲ ငယ်နာမည် ထိန်လင်းကိုပဲ တဖွဖွရွက်ဆိုရင်း ပြောဆိုနေတာဟာ မြင်ရကြားရသူအဖို့ ရင်နင့် ကြေကွဲစရာ မြင်ကွင်းလေးပါ ။၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျဆုံး သွားကြတဲ့ အာဇာနည် ၉ ဦးမှာ အဖွားစုရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲက ညီအကို အရင်းနှစ်ယောက် ပါဝင်သွားခဲ့တာပါ ။
အဖွားစု အားကိုးရတဲ့ သားအကြီး ဦးဘဝင်းရယ် ၊ အဖွားစု အချစ်ဆုံး အထွေးဆုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရယ် တို့ပါပဲ ။ဗိုလ်ချုပ်က ကျည်ဆံ ၁၃ ချက် ၊ အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ ဦးဘဝင်းက ကျည်ဆံ ၈ ချက် သင့်ပြီး အတွင်းဝန်ရုံးရဲ့ အစည်းအဝေး ခန်းမထဲမှာ ကျဆုံးခဲ့ရရှာပါတယ် ။ဗိုလ်ချုပ်အသက်က ၃၂ နှစ် ၊ ဦးဘဝင်းအသက်က ၄၄ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ် ။သားနှစ်ယောက်လုံး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကြားရတဲ့ မိခင်တယောက်ရဲ့ ရင်တွင်းက အပူသောကကို ကိုယ်ချင်းစာ သနားမိပါတယ် ။
နတ်မောက်ကနေ ရန်ကုန်ကို မိခင်သောကအပူတွေနဲ့ လိုက်လာမှာ မြင်ယောင်မိပါတယ် ။သူ့ခမျာ မုဆိုးမကြီးလေ . . . ။ ဖေးမပေးမည့် ယောင်္ကျားသားကလည်း ဘေးမှာ မရှိ ။ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အဖေ ရှေ့နေကြီး ဦးဖာက ဗိုလ်ချုပ် ၁၆ နှစ်သား( ၁၀ တန်းကျောင်းသား)ကတည်းက ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ ။ပုဂံရာဇဝင်မှာ သားတွေ အသတ်ခံရလို့ပုပ္ပါးကနေ တောင်ပြုံးကို မနားတမ်း အပြေးလာရင်း အမရပူရမှာ ရင်ကွဲပြီး သေရှာတဲ့ မယ်ဝဏ္ဍလေးရဲ့ သောကအပူထက် နိမ့်ရှာမယ်မထင်ပါဘူး ။
ဈာပနကိစ္စတွေပြီးလို့ နတ်မောက်ကိုပြန်ဖို့ ဘူတာမှာ ရထားစောင့်နေတုန်း ဖြစ်ရပ်ကလေးကိုလည်း တင်ပြချင်ပါတယ် ။ဇူလိုင်မိုးကလေးကလည်း တဖွဲဖွဲ ..အဖွားစုမျက်ဝန်းအိမ်မှာလည်းမျက်ရည်တွေ ဝဲရှာနေလိမ့်မယ် ။သူချစ်တဲ့သူ့သားကြီးတွေကို တသက်တာ ပြန်မတွေ့ကြရတော့ပဲ ရန်ကုန်မှာအပြီး ထားရစ်ခဲ့ရပြီကိုး ။ဘူတာရုံက ခုံကလေးပေါ်မှာ အဖွားစု ငေးနေတုန်း အဖိုးကြီးတယောက်ဟာ အဖွားစုနားကပ်လာပြီးကန်တော့ခွင့်တောင်းပါတယ် ။
အဖွားစုက. . .’ မင်းက ငါ့ထက်တောင် ကြီးမယ်ထင်တယ်ကွဲ့ ငရဲတွေကြီးနေပါ့မယ်ကွယ်’ ..လို့ပြောပေမဲ့ ..အဲဒီဦးကြီးက . . .” ကျွန်တော်ကန်တော့တာဟာ ဒေါ်စုရဲ့အသက်ကို ကန်တော့တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ….ဗိုလ်ချုပ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုရဲ့’ ဗိုက် ‘ကိုကြည်ညို လေးစား မြတ်နိုးလွန်းလို့ ကန်တော့တာပါ ” လို့ပြောပြီး ရိုရိုသေသေနဲ့ ထိုင် ကန်တော့သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဘူတာထဲမှာ သူတို့ဖြစ်စဉ်ကို ဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ သူတွေအားလုံးလည်း ဇူလိုင်မိုးနဲ့အတူ မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ .. ။( စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရင်း တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြသူတွေ အားလုံး . . .’ မနာလိုခြင်း ကျည်ဆံတွေ ‘ ကင်းဝေးကြပါစေ….)။
Credit …..orginal writer
ဒျေါစုပွောတဲ့ သား ထိနျလငျး လူမိုကျကွီး အမစေ့ကားနားမထောငျလို့ ဒီလိုအဖွဈဆိုးနဲ့ေ-သရတာတဲ့ (အမတေဈယောကျရဲ့ရငျတှငျးက အပူသောက)
သား ထိနျလငျး .. လူမိုကျကွီး …အမစေ့ကားနားမထောငျလို့ ဒီလိုအဖွဈဆိုးနဲ့ သရေတာ ..‘ လူဆိုတာ အထကျရောကျနရေငျ မနာလိုဖွဈပွီး မလိုသူမြားက မကောငျးကွံစညျတတျတယျ … အစစ အရာရာ သတိထားပါ ‘ လို့
အမပွေောတုနျးက မငျးက လကျမခံဘူးလေ . . .‘ဗြာ .. ဘုရားတောငျမှ အတိုကျအခံ ရှိသေးတာပဲ ၊ကိုယျကသာ လမျးမှနျဖကျကနပွေီး …..အကွောငျးမှနျကို လကျကိုငျထားရငျ ဘာမှကွောကျစရာ မလိုပါဘူး . စဈတိုကျတုနျးကတောငျ မသခေဲ့တာ ..မပူပါနဲ့ ‘ တဲ့ ..ဟငျ ….ခုတော့ မငျးပွောသလို တိုကျပှဲကွားက ကညျြဆံတှကွေောငျ့ ကဆြုံးရတာ မဟုတျပဲ…
‘မနာလိုခွငျး ကညျြဆံတှေ ‘ အသငျ့ခံလိုကျရပွီမို့လား … ‘‘ သမီးလေးအတှကျ ခမညျးလေးပေးခငျြလို့ပါ..ဆိုပွီး အမဆေီ့ကို နားကဒျကလေး လာတောငျးခဲ့တဲ့ သားကွီး . . .တပွားတခပျြမှ မရပဲ တိုငျးပွညျအတှကျ အလုပျ လုပျရငျး အသကျပါ စှနျ့ခဲ့ရပီပေါ့ ထိနျလငျးရယျ ..”
ဗိုလျခြုပျအမေ အဖှားစုဟာ ဗိုလျခြုပျအလောငျးကို တှတှေကွေီး ကွညျ့ရငျး ဂရုဏာဒေါသောနဲ့….ဗိုလျခြုပျရဲ့ အမညျအောငျဆနျးကို မချေါပဲ ငယျနာမညျ ထိနျလငျးကိုပဲ တဖှဖှရှကျဆိုရငျး ပွောဆိုနတောဟာ မွငျရကွားရသူအဖို့ ရငျနငျ့ ကွကှေဲစရာ မွငျကှငျးလေးပါ ။၁၉၄၇ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ ကဆြုံး သှားကွတဲ့ အာဇာနညျ ၉ ဦးမှာ အဖှားစုရဲ့ ဝမျးဗိုကျထဲက ညီအကို အရငျးနှဈယောကျ ပါဝငျသှားခဲ့တာပါ ။
အဖှားစု အားကိုးရတဲ့ သားအကွီး ဦးဘဝငျးရယျ ၊ အဖှားစု အခဈြဆုံး အထှေးဆုံး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရယျ တို့ပါပဲ ။ဗိုလျခြုပျက ကညျြဆံ ၁၃ ခကျြ ၊ အကိုကွီးဖွဈတဲ့ ဦးဘဝငျးက ကညျြဆံ ၈ ခကျြ သငျ့ပွီး အတှငျးဝနျရုံးရဲ့ အစညျးအဝေး ခနျးမထဲမှာ ကဆြုံးခဲ့ရရှာပါတယျ ။ဗိုလျခြုပျအသကျက ၃၂ နှဈ ၊ ဦးဘဝငျးအသကျက ၄၄ နှဈပဲ ရှိပါသေးတယျ ။သားနှဈယောကျလုံး အသတျခံလိုကျရတဲ့ အကွောငျးကွားရတဲ့ မိခငျတယောကျရဲ့ ရငျတှငျးက အပူသောကကို ကိုယျခငျြးစာ သနားမိပါတယျ ။
နတျမောကျကနေ ရနျကုနျကို မိခငျသောကအပူတှနေဲ့ လိုကျလာမှာ မွငျယောငျမိပါတယျ ။သူ့ခမြာ မုဆိုးမကွီးလေ . . . ။ ဖေးမပေးမညျ့ ယောင်ျကြားသားကလညျး ဘေးမှာ မရှိ ။ဗိုလျခြုပျရဲ့အဖေ ရှနေ့ကွေီး ဦးဖာက ဗိုလျခြုပျ ၁၆ နှဈသား( ၁၀ တနျးကြောငျးသား)ကတညျးက ကှယျလှနျသှားခဲ့တာပါ ။ပုဂံရာဇဝငျမှာ သားတှေ အသတျခံရလို့ပုပ်ပါးကနေ တောငျပွုံးကို မနားတမျး အပွေးလာရငျး အမရပူရမှာ ရငျကှဲပွီး သရှောတဲ့ မယျဝဏ်ဍလေးရဲ့ သောကအပူထကျ နိမျ့ရှာမယျမထငျပါဘူး ။
ဈာပနကိစ်စတှပွေီးလို့ နတျမောကျကိုပွနျဖို့ ဘူတာမှာ ရထားစောငျ့နတေုနျး ဖွဈရပျကလေးကိုလညျး တငျပွခငျြပါတယျ ။ဇူလိုငျမိုးကလေးကလညျး တဖှဲဖှဲ ..အဖှားစုမကျြဝနျးအိမျမှာလညျးမကျြရညျတှေ ဝဲရှာနလေိမျ့မယျ ။သူခဈြတဲ့သူ့သားကွီးတှကေို တသကျတာ ပွနျမတှကွေ့ရတော့ပဲ ရနျကုနျမှာအပွီး ထားရဈခဲ့ရပွီကိုး ။ဘူတာရုံက ခုံကလေးပျေါမှာ အဖှားစု ငေးနတေုနျး အဖိုးကွီးတယောကျဟာ အဖှားစုနားကပျလာပွီးကနျတော့ခှငျ့တောငျးပါတယျ ။
အဖှားစုက. . .’ မငျးက ငါ့ထကျတောငျ ကွီးမယျထငျတယျကှဲ့ ငရဲတှကွေီးနပေါ့မယျကှယျ’ ..လို့ပွောပမေဲ့ ..အဲဒီဦးကွီးက . . .” ကြှနျတျောကနျတော့တာဟာ ဒျေါစုရဲ့အသကျကို ကနျတော့တာ မဟုတျပါဘူးဗြာ….ဗိုလျခြုပျလိုပုဂ်ဂိုလျမြိုးကို မှေးဖှားပေးခဲ့တဲ့ ဒျေါစုရဲ့’ ဗိုကျ ‘ကိုကွညျညို လေးစား မွတျနိုးလှနျးလို့ ကနျတော့တာပါ ” လို့ပွောပွီး ရိုရိုသသေနေဲ့ ထိုငျ ကနျတော့သှားခဲ့ပါတယျ ။
ဘူတာထဲမှာ သူတို့ဖွဈစဉျကို ဝိုငျးကွညျ့နကွေတဲ့ သူတှအေားလုံးလညျး ဇူလိုငျမိုးနဲ့အတူ မကျြရညျတှေ ဖွိုငျခဲ့ကွရတယျပေါ့ .. ။( စှနျ့လှတျအနဈနာခံရငျး တိုငျးပွညျအတှကျအလုပျလုပျနကွေသူတှေ အားလုံး . . .’ မနာလိုခွငျး ကညျြဆံတှေ ‘ ကငျးဝေးကွပါစေ….)။
Previous Article မြန်မာပြည်တွင်မက ကမ္ဘာမှာပါဂင်းနစ်စံချိန်တင်တော့မည့် ၊ကျောက်ဆည်မြို့နယ် သံရွာအုပ်စု သံနောက်ရွာမှာတည်ရှိတဲ့လက်ပံပင်ကြီး
Next Article “ ပုဂံမှ QR ကုတ် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ လူအရောက် အပေါက်နည်းပြီး ထူးခြားသော နေရာတစ်ခု ”